दाङका अवैध क्रसर हाेलान त बन्द ? - जनमुखी खबर दाङका अवैध क्रसर हाेलान त बन्द ? - जनमुखी खबर दाङका अवैध क्रसर हाेलान त बन्द ? - जनमुखी खबर
दाङका अवैध क्रसर हाेलान त बन्द ?
कार्तिक २८, २०७७
दाङमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन हुने भएको छ । जिल्लाका सरोकारवालाहरुको शुक्रवार घोराहीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन क्रसर उद्यागको विवरण र मापदण्ड बारे अनुगमन गरिने जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।
गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गदै मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सन्चालन भए/नभएको बारेमा अनुगमन गरी एक हप्ता भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । भोली शनिवार राप्ती र गढवामा अनुगमन हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
दाङमा मापदण्ड विपरित क्रसर संचालनमा आएको भन्दै गएको साउनमा ८६ वटा क्रसर उद्योगका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा घोराही १३ निबासी प्रेम बुढाको रिट निवेदन परेको छ । जिल्लामा अबैध रुपमा चलेको क्रसर बन्द गर्नका लागि नागरिक स्तरमै दवाव रहेपनि खुलेयाम चलेेेका छन । जस्लेे गर्दा नदि जन्य बस्तुुकाेे चाेरि बढेकाेे बताईन्छ । यद्यपि सरकारले चालेेेेकाेे याेे कदमले केेेेहि अाशा जगाएकाेे छ ।
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक गम्भीर घाइते
रासस दाङ प्रमुख रजाैरेलाई पति शाेक
तुलसीपुरका एक संक्रमितको निधन,सक्रिय संक्रमित १२८ जना
वडा कार्यालय सार्ने निर्णयको विरोध
मङि्सर ११, २०७७
सकियो नेकपा सचिवालय बैठक, पुन: १६ गते बस्ने
मङि्सर १३, २०७७
पश्चिम बागरमा १५ सैयाको अस्पताल शिलान्यास
मङि्सर १५, २०७७